काठमाडौंमा लकडाउन : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन ? हेर्नुहोस् | Butwal Dainik
काठमाडौंमा लकडाउन : के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइदैन ? हेर्नुहोस्
काठमाडौं, भदाै ३ । कोरोना भाइरसको महामारीलाई रोकथाम गर्नका लागि काठमाडौ, ललितपुर र भक्तपुरमा बुधबार राति १२ बजेदेखि एक साताका लागि निधेषाज्ञा जारी गरिएको छ।
उपत्यकामा कोरोना भाइरसका संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएपछि उपत्यकामा निषेधाज्ञाको निर्णय भएको हो। निषेधाज्ञाको समयमा औषधि खाद्यवस्तु तथा अन्य अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तु वा सेवा खरिदको काम बाहेक अरु व्यक्ति घरबाहिर निस्क नपाइने ।
अत्यावश्यक बाहेक सबै पसल बन्द गर्नुपर्ने । र खाद्यन्न ढुवानीको सवारीसाधन मात्र सञ्चालन गर्न पाइने र अरु सबै सवारीसाधन सञ्चालन गर्न नपाइने । त्यस्तै फुटपातको व्यापार, होटल, रेस्टुरेन्ट तथा कवाडी लगायतको व्यवसाय गर्न निषेध गरिएको छ । त्यस्तै आदेशको उंघन गरेमा कानूनी बमोजिम कार्वाही गरिने जनाइएको छ ।